Archive du 20180926
Marc Ravalomanana Nihaona tamin’ny Vondrona Eoropeanina
Efa hatramin’ny 2009 i Marc Ravalomanana, dia efa nanomana ny fiverenana amin’ny fitondrana, hahafaha-manarina ny firenena izay potiky ny krizy nateraky ny fanonganam-panjakana.
Fanaratsiana amin`ny facebook “Misy andraikitra azo raisina”, hoy Imbiki Herilaza
Hitantsika fa tena miroborobo be ny fifanenjehana sy fifanaratsiana ny mirotsaka hofidiana hita eny amin`ny tambajotran-tserasera, ny facebook moa no tena ahitana izany eto Madagasikara.
Andry Rajoelina Miantehitra mafy amin’ny Frantsa-Afrika
Nandao an’i Frantsa ny alarobia 19 septambra teo i Andry Rajoelina avy eo nihazo an’i Dakar renivohitr’i Sénégal Mba hanatrika fivoriana momba ny « Science Politique ».
Antoko TEZA Fifidianan’i Baroa no misy eto
Raha jerena ny fanarahan-dalàna amin’ny propagandy dia be ny kolikolim-pifidianana, hoy ny filohan’ny antoko Teza Rakotoamboa Jean Louis.
Seces Antananarivo « Tsy ny fianakaviambe iraisam-pirenena no tokony hibaiko eto. »
Efa naneho hevitra momba ny raharaham-pirenena izahay, hoy ny filohan’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo na ny Seces Tana, Sammy Gregoire Ravelonirina, ny 21 septambra teo.
Dinam-pifanarahana Mivonona hanasonia ny ankamaroan`ny kandidà
Tsara ny andraikitra noraisin`ny CFM tao anatin`ny fandaminana ny fifandraisana eo amin`ny samy kandidà ary inoana fa hiditra ao anatin`io dinam-pifanarahana io ny fialana amin`ny fifanaratsiana sy fifanenjehana ao anatin`ny tambajotran-tserasera sy ao anatin`ny haino aman-jery rehetra.
Fahitan’ny ONU ny fifidianana filoha Manga ny lanitra hatreto, hoy i Abdoulaye Bathily
Nifarana omaly talata 25 septambra ny iraka nataon’ny Mpanolotsaina manokan’ny Sekretera Jeneralin’ny Firenena Mikambana, Abdoulaye Bathily, izay nigadona teto Antananarivo ny 18 septambra teo.
Filohan’ny CENI Hanakorontana ny fanaovana “Sondage”
Tsy mbola mety eto Madagasikara ny fanaovana tombana mialoha ny mety ho vokatry ny fifidianana na “Sondage”, hoy ny filohan’ny CENI Hery Rakotomanana omaly raha niresaka tamin’ny mpanao gazety izy,
Fivorian’ny Firenena Mikambana Rivo Rakotovao no mitondra ny baolina
Nanomboka tamin’ny fomba ofisialy omaly talata 25 septambra any New York Etazonia ny fivorian’ny Firenena Mikambana andiany faha-73, izay marihina fa voasolotena ao avokoa ireo firenena 193 mpikambana, ka filoham-panjakana ny 130 amin’ireo.
Mankaleo be ahy mihitsy ity revinareo eto an-tanàna ity ry Jean ka ! Marina e e !
Eo am-pandrasana mahita ny atiny
Roso hatrany ny dia mankany amin’ny fifidianana. Mandeha ny fanomezan-toky avy amin’ny mpikarakara isan-tsokajiny fa dia tena handeha amin’ny laoniny tokoa io na eo aza ny mpanao politika sasany mivoy sy miezaka milaza fa tsy hisy zava-banona eto.
Trangan’aretina pesta Olona 21 hatreto no ahiana
Raha ny tatitra navoakan’ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka dia miisa 21 hatreto ireo trangan’aretina pesta ahiana manerana ny nosy.
Ady amin’ny pesta Nodiovina ny tsenan’Anosibe, Namontana…
Roso amin’ny fanadiovan-tanàna ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny SAMVA ary ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary, hotronin’ny minisiteran’ny rano hahafahana miady amin’ny pesta.
Fihaonambe ara-toekaren’ny Oseana Indiana Hisokatra amin’ny kaontinanta afrikanina
Hotanterahina etsy amin’ny village Voara Andohatapenaka manomboka anio ny fihaonambe ara-toekaren’ny nosy manodidina ny Oseana Indiana andiany faha-11.
Foara mahakasika ny vatosoa sy ny firavaka Hampisongadina ny haren’i Madagasikara
Sambany eto amin’ny firenena no hisy foara be momba ny vatosoa sy ny firavaka ( Madagascar Gem and Jewellery fair -1ère edition ) izay hotanterahina eny amin’ny Mining Business Center Ivato ny 23 hatramin’ny 27 oktobra ho avy izao.
Iraky ny FMI Nihaona tamin’ny praiminisitra
Nihaona tamin’ny praiministra Ntsay Christian teny Mahazoarivo omaly ireo iraka avy amin’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) notarihin’i Marshall Mills.
ENY TSIAFAHY ILAY NAMONO DIPLAOMATY
Naiditra am-ponja vonjimaika eny amin’ny fonjan’i Tsiafahy ilay tovolahy 27 taona namono ilay diplaomaty amerikanina teny Ambohibao.
Matanjaka ny tambajotran’ireo maintimolalin’ny mpianatra avy any Grande Bretagne, hoy ry zareo izay efa avy nandranto fianarana tany an-toerana.
Lehilahy iray nitondra bisikileta no nianjera tampoka avy teny ambonin’ny bisikileta notaingenany omaly tolakandro teny Ambatobe.
Tanjon’ny fampandrosoana lovain-jafy Mbola mila ezaka be i Madagasikara
3 taona katroka omaly no nifidy ary nifanaiky ny hanatratra ny tanjon’ny fampandrosoana maharitra (ODD) ireo filoham-panjakana sy mpitantana avy amin’ny firenena 133 manerana izao tontolo izao.
Asa eny anivon’ny kaominina Teknisianina 20 nahazo fiofanana teto Analamanga
Mbola mila fanatsarana be dia be ny asa eny anivon’ny kaominina ankehitriny, indrindra fa ny any ambanivohitra.
Hetsika fampiratiana sakafo Hanome lanja ny fahaiza-manao Malagasy
Omaly talata 25 septambra no nampahafanatarana tetsy amin’ny AFT Andavamamba ny fisian’ny hetsika hankalazana ny sakafo Malagasy sy ny manodidina azy izay atao ao ihany ny 28 hatramin’ny 30 septambra ho avy izao.